Dashboardka COVID-19 - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Iskuullada Deegaanka Robbinsdale COVID-19 Dashboard, oo raadraaca xog kala duwan si looga caawiyo la socodsiinta go'aannada hawlgalka, ayaa sidoo kale loo soo bandhigaa bulshada toddobaadle ah. Intii aan bixinayna xaalad caafimaad oo guud, waxaan weli naga go'an inaan ilaalino sirta iyo macluumaadka shaqsiyaadka ardayda iyo shaqaalaha ah.
Wadarta tirada shaqaalaha Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Tirada shaqaalaha hadda ku jira karantiilka ama go'doominta sababtoo ah loo aqoonsaday inay yihiin xiriir dhow, oo muujinaya ugu yaraan mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ama ugu yaraan laba ka mid ah astaamaha ugu caansan ee COVID-19, ama lahaanshaha xubin reerka ka mid ah oo leh astaamo karantiil .
Tirada kiisaska shaqaalaha ee la xaqiijiyay usbuuca Abriil 26 - May 2, 2021.
Tirada guud ee kiisaska shaqaalaha la xaqiijiyay tan iyo bishii Ogos 24, 2020
Tirada guud ee ardayda K-12 ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Tirada ardayda hadda ku jirta karantiilka ama go'doominta sababtoo ah loo aqoonsaday inay yihiin xiriir dhow, oo muujinaya ugu yaraan mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ama ugu yaraan laba ka mid ah astaamaha ugu caansan ee COVID-19, ama lahaanshaha xubin reerka ka mid ah oo leh astaamo karantiil .
Tirada kiisaska ardayda la xaqiijiyay ee usbuuca Abriil 26 - Meey 2, 2021.
Tirada isugeyneysa ee kiisaska ardayga ee laxaqiijiyay ilaa Agoosto 24, 2020
Xogta illaa May 2, 2021
Xogta waxaa ku jira shakhsiyaad aan daruuri ku ahayn goobta iskuulka ama dhismaha degmada - laakiin go'doomin / karantiil ama imtixaan laga qaaday inta lagu guda jiro barashada fogaanta / shaqada fog.
Wixii macluumaad ah ee ku saabsan lambarrada degmada, fadlan eeg dashboard-ka Degmada Hennepin County COVID .
Kiisaska wanaagsan ee ka jira dugsiyadeennu waa tiro muhiim ah, laakiin waa hal arrin oo gacan ka geysaneysa sameynta sawirka guud ee degmadeena iyo awooddeeda ay ku siiso ardayda jawi waxbarasho oo ammaan ah. Muunad ka mid ah qodobo dheeri ah oo loo isticmaalo in go'aan looga gaaro qaababkeenna waxbarasho waa:
baahida shaqaalaha iyo kartida
Hanuuninta Waaxda Waxbarashada ee Minnesota
Hanuuninta Waaxda Caafimaadka ee Minnesota
la xiriir kartida baafinta
awoodaha fududeynta kala fogaanshaha bulshada
Qoysaskeena, fadlan ogow in tani ay tahay xaalad isbedeleysa waxaanan la soconaa dhamaan waxyaabaha ku lugta leh si aan u gaarno go'aano danta ugu weyn ee caafimaadka, nabadgelyada iyo waxbarashada ardaydeena.
Fadlan ardayda iyo walaalaha ku hay guriga marka calaamadaha COVID-19 ay dhacaan ama ay sugayaan natiijooyinka imtixaanka COVID-19. La xiriir dugsiga oo soo wargeli maqnaanshaha iyo sababta maqnaanshaha. Ardayda / qoysaska waa inay u soo sheegaan dacwad wanaagsan iskuulkooda inta lagu jiro maalinta iskuulka.
Qaabab barashada Shaxda Ururada